laamaha Ammaanka Somalia oo baadi-goobaya maleeshiyaad dilay laba Ruux - Awdinle Online
laamaha Ammaanka Somalia oo baadi-goobaya maleeshiyaad dilay laba Ruux
Ciidamo ka tirsan kuwa Nabadsugida & Milalteriga Soomaaliya ayaa waxaa ay ka bilaabeen howlgallo Gobolka Galgaduud howlgal lagu baadi goobayo maleshiyaad hubeysnaa oo xalay dil ka geystay degaano ka tirsan gobolkaas.
Maleeshiyaadka hubeysnaa oo u baxsaday degaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay laba Ruux ku dileen inta u dhaxeysa degaannada Xananbuure & Miirajiicle, dilkaas oo la sheegay in uu la xiriiray aanooyin qabiil oo ka jira degaano ka tirsan Galmudug.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada howlgalka kujira ayaa waxaa ay sheegen in maleeshiyaadka dilka geystay ay ku dhuumaaley sanayaan aaga degaanka Bohol ,hayeeshee Ciidamada dowladda aysan ka hari doonin ilaa iyo inta ay gacanta uga soo dhigayaan.
Dadka degaannada Xananbuure & Miirajiicle ayaa waxaa ay sheegeen in manta degaannadaas siweyn looga dareemayo xiisado colaadeed oo salka ku haaya dilak loo geystay labada Ruux.
Previous articleQaar kamid ah Wadooyinka ugu muhiimsan Muqdisho oo xirmay
Next articleMadaxweyne hore Sheekh Shariif oo gaaray Magaalada Jowhar+Sawirro